Beginners - MiDond စက်ပစ္စည်းတချို့သစ်သားထွင်းထုစွမ်းရည်
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အစပြုသူများအတွက်သစ်သားထွင်းထုစွမ်းရည်အချို့
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-05-03 မူလ:ဆိုက်ကို
သစ်သားထွင်းထုရေးဆွဲခြင်းနည်းစနစ်များကိုအဓိကအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် whittling ၏အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ထွင်းထုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတိအကျဖြစ်ရန်အတွက်ပြင်ပမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုနုတ်ခြင်းဖြင့်ပုံစံအဆင့်ကိုလှမ်း။ ပြသရန်ဖြစ်သည်။Woodworking ကိရိယာများပါဝင်Woodworking ပါဝါကိရိယာများ,လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ နှင့်ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုစသည်တို့
အလုပ်တစ်ခုမဖန်တီးမီ, ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သစ်သားနှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုခုသိသင့်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သင့်တော်သောပစ္စည်းများရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲသစ်သားသည်ထွင်းရန်လွယ်ကူသည်, သို့သော်ခက်ခဲသောသစ်သားသည်ထွင်းရန်ခဲယဉ်းသည်။ Hardwood သည်ခက်ခဲသောသစ်သားနှင့်တောက်ပသောအရောင်များနှင့်တောက်ပသောအရောင်နှင့်တောက်ပသောအရောင်များဖြစ်သော Mahogany, Boxwood, Rosewood, Alcstwood စသည်တို့ကိုသစ်မာဟုခေါ်သည်။ ထွင်းထုခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ထွင်းထုထားသောထွင်းထုသည့်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးထွင်းထုထားသောအဆောက်အအုံနှင့်ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ with ာန်နှင့်အတူသင့်လျော်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျိုးပဲ့သွားပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်မြင့်မားသောစုဆောင်းမှုတန်ဖိုးရှိသည်။သို့သော်၎င်းသည်ထွင်းရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်,ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုပျက်စီးစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Woodwood, Ginkgo Wood, Camphorwood, Pine စသည့်အစပြုသူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ဤသစ်သားမျိုးသည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အထွေထွေပုံရိပ်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောသစ်သားဖြင့်သင့်တော်ပြီးထွင်းထုရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောသစ်သားနှင့်အားနည်းသောအရောင်ကြောင့်အချို့မှာ TimingAndweightweightweightweighte ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်မော်ဒယ်လ်များနှင့်လွင်ပြင်များပိုမိုများပြားလာလေလေ, သစ်သားဂျုံစပါးပြောင်းလဲမှုများသည်ပိုမိုချမ်းသာကြွယ်ဝသည်။ ပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်စွာနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာပုံစံများသည်ပုံသဏ္ diff ာန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်သစ်သားဂျုံစပါးလမ်းကြောင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောစံနမူနာကောင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ပင်မမျှော်လင့်ဘဲကောင်းသော - ရှာဖွေနေနှင့်အလွန်အမင်းအလှဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သိပ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးသေးငယ်လွန်းတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကသစ်သားစပါးကိုပျက်စီးစေရုံသာမကအမြင်အာရုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။
စိုစွတ်သောသစ်သားထွင်းထုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးခန်းခြောက်ရမယ်။
ထင်းသည်ရေနွေးငွေ့ခြောက်သွေ့ခန်းတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားပြီးရေငွေ့ပျံမှုအားဖြင့်ထင်းခြောက်သွေ့စေရန်ရေငွေ့တင်ပို့မှုကိုမြှင့်တင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သစ်လုံးခြောက်သွေ့သောမှတ်တမ်းများကို 30% အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ သို့သော်ထင်းသည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားပြီးသောအပူချိန်မြင့်မားပြီးနောက်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပျက်စီးသွားရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ထွင်းထုထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
သစ်သားကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာ (ဘုတ်, စတုရန်းသို့မဟုတ် log) ကိုခွဲခြားပါ။ stacking များအတွက်ဘေးဖယ်ထား။ stack ၏အောက်ခြေသည်မြေအောက်အထက် 60 စင်တီမီတာရှိသည်။ လေထုကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးရန်အလယ်တွင်ကွာဟချက်တစ်ခုရှိသည်။ သဘာဝခြောက်သွေ့ခြင်းယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောလိုအပ်ချက်များကိုရရှိရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်လများစွာကြာသည်။
(3) ရိုးရှင်းပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော Dလှမ်း
တစ်ခုမှာထင်းအတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုမီးနှင့်ခြောက်သွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာဗဓေလသစ်ကိုသစ်သားဖြင့်ရေဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြီးလေထဲတွင်ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်မျိုး၏ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုတိုစေနိုင်သည်။ သို့သော်စိမ်ပြီးသောအခါသစ်သားသည်အရောင်ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထွင်းထုသည့်အခါလျှော့ချခြင်းမပြုသင့်သည့်နေရာကိုလျှော့ချရန်သစ်သားသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအင်အားများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်လူများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ခံစားရနိုင်သည်။ အကယ်. ၎င်းကိုစနစ်တကျကိုင်တွယ်နေပါကအဆက်မပြတ်ဖြစ်ရပ်များကြောင့်လည်းပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဓါးနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အထူးကျက်သရေကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောမတော်တဆအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်လုပ်ငန်းများကိုအဓိပ္ပာယ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထွင်းထုပြီးနောက်Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်နှင့်သေးငယ်တဲ့ polishing စက်နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လျှောက်ထားခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ထွင်းထားသောဓားကိုဓားဖြင့်မည်သည့်တုပမှုကိုမဆိုထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်သာလူတို့သည်အမှန်တကယ်ပိုင်ထိုက်သောအကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သစ်သားအစိမ်းရောင်နှင့်ထွင်းထုထားသောအမှတ်အသားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောအနုပညာဘာသာစကားသည်အခြားပန်းပုပစ္စည်းများမအောင်မြင်နိုင်သည့်ကျက်သရေရှိသည့်ကျက်သရေရှိသည်။ထွင်းထုကိရိယာများစာရင်းပါဝင်ပါသည်အသေးစားပန်းပုပစ္စည်းကိရိယာများ,သတ္တုပန်းပုကိရိယာများနှင့်ကျောက်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများစသည်တို့ကိုစသည်တို့
Woodworking ကိရိယာများ Woodworking ပါဝါကိရိယာများ လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများ Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် သေးငယ်တဲ့ polishing စက် ထွင်းထုကိရိယာများစာရင်း သေးသေးလေးပန်းပုဒ်ဆက်ရေးကိရိယာ သတ္တုပန်းပုကိရိယာများ ကျောက်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ